Taiwan: 26 Aprily 2008, Andro Mahazatra No Sady Andro Manokana · Global Voices teny Malagasy
Taiwan: 26 Aprily 2008, Andro Mahazatra No Sady Andro Manokana
Voadika ny 18 Febroary 2018 6:24 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, македонски, 日本語, 繁體中文, 简体中文, English
Sary an'i Alhorn.
Ny 26 Aprily 2008 dia tokony ho andro mahazatra, tsy misy afa-tsy izay. Nefa, tamin'ity volana Martsa ity, nanamarika hetsika 24ora natao hakàna sary tamin'ny taona 1992 i Wenwei, ary ny 26 Aprily 2008 i Yangphoto nanapa-kevitra ny hanangana bilaogy natao handefasana sary mandritry 24 ora mitohy.
Afaka manampy antsika hitadidy ny tantarantsika ny sary.
Afaka mampatsiahy ny fahavelomantsika ny sary.
Rehefa mitazona ny fakantsarinao ianao,
Tsindrio eo amin'ny bokotra fanapihana mba handraiketana ireo fotoana tena nampihetsi-po indrindra teo amin'ny fiainanao.
Ho valin‘io antso io,
Mpaka sary miisa 190 manerana an'i Taïwan no nandray ny fakantsarin'izy ireo ary nanindry ny bokotra fakàna sary mba hanao fandraiketana ny 24 ora tao Taïwan. Ny 5 May ,alefa amin’ ity blaogy ity ireo sary sy ireo rohy ireo.
00:00-07:00: Olona mamita ny asa omaly, olona miomana ho amin'ny andro vaovao, ary olona manohana ireo andiany roa teo aloha.
07:00-11:00: Olona andalam-pisakafoanana maraina, olona manomboka miasa, ary olona mahazo andro fialàna sasatra
11:00-15:00: Ireo tanora sy ireo saka mifoha ary mivenjivenjy manodidina, olona manohy miasa ary olona eo ampanatrehana hetsika
15:00-17:00: olona manohy miasa, olona eo ampilalaovana ary olona maromaro kokoa milalao.
16:54-21:00: Olona miaraka amin'ny ankohonany, olona miaraka amin'ireo namany, olona andeha miaraka amin'ny tenany ihany, ary olona mitondra sakafo.
21:00-24:00: Olona manohy miasa, olona mody, ary olona miezaka mitady ny fonenany.
Niteny i Yangphoto hoe:
Avy amin'ireo sary ireo, azontsika jerena hoe iza no nanjohy an'io hetsika io: ireo mpakasary miasa ao anaty indostrian'ny fampahalalam-baovao, ireo mpianatra izay manao blaogy matetika, ireo mpanabe, ary ireo olona mahazatra. […] Mety tsy mitovy ny hatsaran'ireo sary ireo, ary mety mampatsiahy ny lafy ratsiny amin'i Taïwan ny ankamaroan'izy ireo, saingy mampiseho izy ireo hoe ahoana marina i Taïwan.
Niteny i Wenwei fa io karazana hetsika io dia afaka
manao izay hahatsapan'ireo mponina tsirairay ao Taïwan fa miara-miaina isika.
Manantena koa izy fa amin'ny hoavy isika afaka hanana
24-ora fandraiketana mikasika ireo orinasa ao Taïwan, ireo asa ao Taïwan, ary ireo vehivavy ao Taïwan
Misy ihany koa lahatsary iray ahitana sary vitsivitsy amin'ity hetsika ity ao amin'ny youtube (nakarin'ny ohho0625):
5 andro izayLaos